တီးတိန်က လူတွေ ဘာလို့ ထွက်ပြေးလာကြတာလဲ
25 มี.ค. 2563 - 01:17 น.
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အကူးခံ ရတဲ့ အမျိုးသားနေထိုင်ရာချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့ကလူတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရမှာ ကြောက်ပြီး ချင်းပြည်နယ်က နေ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ ကို ထွက်ပြေးလာနေကြတယ်လို့ လည်း ကလေးဒေသခံ တစ်ဦး ကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
တီးတိန်ဘက်က နေ ချင်းတောင်ခြေအဆင်း ကလေးမြို့အဝင်ကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက ပိတ်ထားပေမယ့် တောလမ်းတွေဘက် တဆင့် ကလေးမြို့ထဲကို ပတ်ပြီးဝင်လာနေကြတယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ "စားနပ်ရိက္ခာအလုံအလောက်ရှိပါတယ် တီးတိန်ကလူတွေကြောက်လန့်ပြီးထွက်ခွာလာတယ်လို့သိရပါတယ် ကိုယ့်မှာရောဂါရှိနေရင် ဘယ်သွားသွားရောဂါက ပါလာမှာပါ ၊ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပါ ရောဂါရှိရင်ဖုံးမထားပါနဲ့၊ ဘယ်စျေးဘယ်ဆိုင်ကိုမှမပိတ်ပါ ၊သတင်းမှားတွေမယုံပါနဲ့၊ ကိုယ်ချင်းခွာနေရပေမယ့် နှလုံးသားချင်းနီးကပ်ပြီး အချင်းချင်းစည်းလုံးကြပါ ကျွန်မတို့အစိုးရက သတင်းတွေအချိန်နဲ့အမျှထုတ်ပေးနေပါမယ် ပြည်သူသာအဓိကပါ "လို့ပြောသွားပါတယ်။
ကျန်းမားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကတော့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အကူးခံ ရတဲ့ အမေရိကန်က ပြန်လာသူ အမျိုးသား ဧည့်ခံပွဲလုပ်တဲ့ ရွှာကို lock -down လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ သားနှစ်ဦးမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပထမဆုံးတွေ့
အဆိုပါလူနာဟာ သူ့ရဲ့မိခင်နဲ့အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်မြို့ကနေ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ က စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး၊ ကာတာနိုင်ငံ၊ ဒိုဟာမြို့ကတဆင့် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်း မှာBritish airline နဲ့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့လေဆိပ်သို့ မြန်မာ အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း (UB - 503) ဖြင့် ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ နေ့လယ် (၂:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါ တယ်၊
ကလေးမြို့ မှာ ၂ ညအိပ်တည်းခိုခဲ့ပြီးတော့ ရွှေဆိုင်နဲ့ Cherry Photo Studio မှာPre-wedding photo ရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မတ်လ ၁ရ ရက်နေ့မှာ ကလေးမြို့ကနေ တီးတိန်မြိုကို ပြည်ချစ်သားလိုင်းကားနဲ့ ထွက်ခွာ လာခဲ့ကြောင်းနှင့် ကားပေါ်တွင် လူ (၁၂) ဦးပါရှိလာပါတယ်၊တီးတိန်မြို့ လွယ်ဘွားရပ်ကွက်မှာ တစ်ညအိပ် တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၈ရက်န့မှာ တော့ ကပ်တဲလ်ကျေးရွာသို့ AG အသင်းတော်ကားဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ကိုရိုနာကူးစက်ခံရတဲ့ အမျိုးသားနေထိုင်ခဲ့ ကပ်တဲလ် ရွှာကလူတွေဟာ ရွှာ အပြင်မထွက်ကြပေမယ့်ရွာထဲမှ လျောက်သွားနေကြတယ် စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရော လေးလေးနက်နက် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်လို့ အဲ့ဒီကျေးရွာအုပ်စုရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဒိုးဇတွောင် ကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
လူနာ ရှင်က ကျွှန်တော်တို့ ပြောတာကို မယုံဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါကြောင့် သူတို့ကို ရဲ နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးနေထိုင်ဖို့ အစီအမံတွေလုပ်နေတယ် လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က အဲဒီလူနာ ဟာ ရေချိုးပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသွားတယ် ၊အဲဒီမှာ နေမကောင်းစဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကရှင်းပြပါတယ်။
အခုတော့ ရွှာအဝင်အထွက်ကို ပိတ်ထားပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက နေရာ ယူထားတယ်လို့လည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဒိုးဇတွောင် ကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အဆိုပါလူနာသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တလျှောက်မှာ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ပြည်သူ လူထုအနေ နဲ့ နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာန ကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားစေ ဖို့ကိုလည်းနိုးဆော်ထားပါတယ်။
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ည မှာ တီးတိန်ကနေ ဆင်းလာတဲ့ ကား အချို့ကို ကလေးမြို့ အဝင် ခိုင်ကမ်းရွာအနီးပိတ်ထားရာ ကနေ လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
တီးတိန်က လူတွေဟာ စိုးရီမ်စိတ်ကြောင့် ကလေးဘက်ကို ဆင်းလာကြပေမယ့် ကိုရိုနာကူးစက်ခံရတဲ့ အမျိုးသားဟာ ကလေးမြို့မှာ နှစ်ရက် တည်းခိုတာကြောင့် ကလေးမြို့နေထိုင်သူတွေကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိပါတယ်။
အဲဒီလူနာကို တီးတိန်မြို့နယ်၊ပြည်သူဆေးရုံဝင်းအတွင်းရှိ (၈) ခန်းတွဲ၊ (၂) ထပ် ဆောင်သစ်၊ အပေါ် ထပ်မှာ စနစ်တကျ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (Quarantine) ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရ ကပြောပါတယ်။
ဒီလူနာ ဟာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးတော့ စောင့်ကြည့်ကာလ ပြည့်တဲ့အထိ တီးတိန်မှာ ပဲထားမယ်လို့ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တီးတိန်က လူတွေ ဘာလို့ ထွက်ပြေးလာကြတာလဲ